လှုပ်ရှားမှုသို့ခေါ်ဆိုခြင်း - CTA ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သူတို့၏ထိရောက်မှုကိုသင်မည်သို့တိုးတက်စေနိုင်သနည်း။
လှုပ်ရှားမှုသို့ခေါ်ဆိုခြင်း - CTA ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သင်၏ CTR တိုးမြှင့်!
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 7, 2016 သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 12, 2016 Douglas Karr
သင်မေးခွန်းမေးသောအခါတော်တော်လေးသိသာထင်ရှားနေသည်။ လှုပ်ရှားမှုအတွက်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပါ စာဖတ်သူများ၊ နားထောင်သူများနှင့်နောက်လိုက်များအားသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်တွန်းအားပေးရန်အခွင့်အရေးလွဲချော်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခေါ်ဆိုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာဖတ်သူကိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့စေရန် နှိပ်၍ ဖတ်ရန်တွန်းအားပေးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ပုံတစ်ပုံ၊ တစ်ခါတစ်ရံခလုတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်၊ အခြားအချိန်များတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း၏သီးသန့်သိမ်းထားသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုရှိသောဆိုက်များသာမကအကြောင်းအရာအားလုံးနီးပါးသည် (နှင့်အများဆုံးပြုလုပ်သင့်သည်) လုပ်နိုင်သည်။
ဒေသခံကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကလူတွေကိုငါတို့အခမဲ့သတင်းလွှာကိုစာတိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်စာရင်းသွင်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး 71813 မှ - တစ် ဦး အရေးယူမှုမှထိရောက်သောခေါ်ဆိုခ ခေါင်းစဉ်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်လူတိုင်းမိန့်ခွန်းစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအဆင်သင့်ခဲ့ကတည်းက။ လူတွေကိုဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးစာရင်းပေးသွင်းပါလို့တောင်းဆိုတာထက်ပိုကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်အရေးယူရန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပြီး infographics သည်ထိရောက်မှုရှိသင့်သည် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှမခေါ် စာရေးသူအဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလွဲချော်စေသည့်အောက်ဖော်ပြပါဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထူးဆန်းသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုအပြီးမှာကုန်သွယ်ရေးကဒ်ပြားတွေလဲလှယ်ပြီးအပြန်အလှန်ပေးကမ်းခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးတစ်ခုသို့တွန်းပို့ခြင်းသည် CTAs များစွာဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများစွာကိုသင်ရှာမတွေ့ပါ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဖုန်းမခေါ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မပါဘဲတစ်တန်မျှသောအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပါသည်။ သင်လုပ်သမျှအားလုံးရောင်းဖို့ကြိုးစားသင့်သည်မဟုတ်ပါ၊ အချို့သည်ယုံကြည်မှုနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဦး ဆောင်သူများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ အမြဲတမ်းရောင်းပါ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအများစုတွင်ဂါထာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်အချို့သောစကားဝိုင်းများတွင်ရောင်းဝယ်မှုသည်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ့လက်မ၏စည်းမျဉ်းရန်ဖြစ်ပါသည် အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားမှုရန်ဖုန်းခေါ်ပါ သင်၏ရည်မှန်းချက်ကထိုသူအားပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသို့လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်မဟာဗျူဟာသို့ထိရောက်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြန့်ကျက်ရန်သက်သေပြနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာ -
သင်၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုမြင်သာစွာလုပ်ဆောင်ပါ - CTA များအတွက်နေရာချထားမှုသည်စာဖတ်သူ၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်အညီဖြစ်သင့်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည်သဘာဝမျက်စိလှုပ်ရှားမှုကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေးသားသည့်အကြောင်းအရာ၏ညာဘက်ကို CTAs ကိုမကြာခဏထည့်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်၌၎င်းကိုထုလုပ်ရန်အကြောင်းအရာစီးဆင်းမှုသို့၎င်းတို့ကိုအနည်းငယ် ပို၍ တွန်းအားပေးစေနိုင်သည်။ စာဖတ်သူသည် scroll လုပ်သည့်အခါ CTA သည်သူတို့နှင့်အတူရှိနေစေရန်အချို့သောဆိုဒ်များသည် CTA ကို float လုပ်သည်။
သင်၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါ - သင်ပြောတဲ့ပုံထဲကဒါမှမဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညွှန်ကြားချက်တွေကရိုးရှင်းပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လမ်းကြောင်းကလွယ်ကူတယ်၊ ပရိသတ်တွေပိုများလာလိမ့်မယ် (သို့) သင်တောင်းဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပုံရိပ်အခြေပြု CTA သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည်
သင်၏ CTA တွင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ။ ခေါ်ဆိုမှု၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စတင်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်မှုစကားလုံးများကိုအသုံးချသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပုံရိပ်အခြေပြု CTA ဖြစ်ပါက၎င်းတို့ကိုအလွန်အမင်းနှိုင်းယှဉ်သောခလုတ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဝက်ဘ်အသုံးပြုသူများသည်ခလုတ်များကိုနှိပ်ရန်ပညာတတ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ထိုပုံသည်၎င်းတို့ယူရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်အလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်သည်။
အရေးတကြီးသဘောထားကိုထည့်ပါ - အချိန်ကုန်ပြီလား။ ကမ်းလှမ်းချက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမလား ထိုင်ခုံအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသလား? စာဖတ်သူကိုနောက်မှမဟုတ်ဘဲယခုလုပ်ဆောင်ရန်ဆွဲဆောင်ရန်ကူညီသည့်အရာသည်သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ အရေးတကြီးသဘောထားကိုထည့်သွင်းခြင်းသည် CTA တိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်များအပေါ်အကျိုးကျေးဇူးများ Push - များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအစားသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဂုဏ်ယူကြသည်။ ဒါဟာသင်ရောင်းသောအရာကိုမ; ၎င်းသည်ဝယ်သူအားဝယ်ယူရန်ဆွဲဆောင်သောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ အရာတွေကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးနေသလား။ လက်ငင်းရလဒ်များရရန်? အခမဲ့အကြံဥာဏ်ရယူရန်?
ပြောင်းလဲခြင်းဖို့ Path ကိုစီစဉ်ထားပါ - ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအတွက်လမ်းကြောင်းသည်မကြာခဏဖတ်လေ့ရှိသည်၊ CTA ကိုကြည့်ပါ၊ ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးပြောင်းပါ။ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းသင်၏အကြောင်းအရာများကိုလူတို့အားယူဆောင်စေလိုသည့်လမ်းကြောင်းကိုမြင်ယောင်မြင်ယောင်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းကသင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်သင်၏ Call To Action မဟာဗျူဟာနှင့်ပိုမိုပြောင်းလဲရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ CTAs စမ်းသပ်ပါ - ပိုကောင်းသောစီးပွားရေးရလဒ်များကိုမည်သည့်အရာကမောင်းနှင်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင်၏ CTAs ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမလုံလောက်ပါ - ကုမ္ပဏီများစွာသည်အခြားဒီဇိုင်းများ၊ စကားလုံးများ၊ အရောင်များနှင့်အရွယ်အစားများကိုအစားထိုးရန်အချိန်ယူကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုးရှင်းသောဝါကျသည်စုံလင်သည်၊ အခြားအချိန်များတွင်မူ animated gif တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစမ်းသပ်ပါ - အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း၊ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ၁၀၀% ကျေနပ်မှုအာမခံ၊ လျှော့စျေး။ ပြောင်းလဲမှုပိုမိုများပြားလာစေရန်အတွက်မတူညီသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ သို့သော်ထိုကမ်းလှမ်းချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖောက်သည်များထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်တိုင်းတာရန်သေချာပါစေ။ ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်စာချုပ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်ဖောက်သည်များဆုံးရှုံးမှုကိုသာကြိုတင်သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုမျှဝေသည့်အခြားအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ Do's နှင့်ထိရောက်သောခေါ်ဆိုမှုများ - လုပ်ဆောင်မှု၏ Don'ts.
Tags: ကာတွန်း gifအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှမခေါ်အရေးယူအရောင်ကိုခေါ်ပါလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာကိုခေါ်ပါအရေးယူပုံသဏ္toာန်ကိုခေါ်ပါအရေးယူအရွယ်အစားကိုခေါ်ပါလုပ်ဆောင်ချက် verbiage ကိုခေါ်ပါလုပ်ဆောင်ချက်စကားလုံးများကိုခေါ်ပါctaCTA ခလုတ်များcta တည်နေရာcta ပုံသဏ္.ာန်cta အရွယ်အစားcta စကားလုံးများ
မေလ 5, 2015 မှာ 9: 08 AM
ထိရောက်သော CTA မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အကြံပေးချက်များကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်အပြင်အဆင်နှင့်စာမျက်နှာအရောင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသောရလဒ်အတွက်များစွာအရေးကြီးသည်။ ငါအများအပြားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီမံခန့်ခွဲပါပြီကြောင့်တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။
မိုက်ကယ် Berry ဟာ
19:2017 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 52
ဤကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာ ebook အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း“ ငါဒီလိုချင်တယ်” သို့မဟုတ်“ ယခုဒေါင်းလုပ်!” အစား။ ပရိသတ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။သွား!"ခလုတ်ကို CTA စာသား။
၎င်းသည် ebook တွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့် (စျေးကွက်မဖွင့်မီစတော့စျေးနှုန်းများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ယူအက်စ် ADR များတွင်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုအသုံးပြုပါ။ ) နှင့်အဓိကအားဖြင့်စတော့စျေးကွက်ကုန်သည်များနှင့်စိတ်အားထက်သန်သူများဖြစ်သည့်ပရိသတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရှာပါ ဒီမှာ.